HERISETRA ARA-NOFO : Vao 9 taona dia naolan-draikeliny, mitantara ireo sedra niainany izy
Iray amin’ireo vehivavy miisa 30, nianjadian’ny herisetra ka nahazo fiofanana nampanaovin’ny fikambanana Fitia, tarihin’ny vadin’ny Filoham-pirenena i Volana* (Anarana novaina ho fiarovana ny zony sy araka ny fangatahany). 12 octobre 2021
Naolan’ny raikeliny teo amin’ny fahasivy taonany izy. Niharan’ny herisetra ara-nofo nandritra ny telo taona kanefa mbola zaza. Nanaiky niresaka tamin’ny mpanao gazety izy taorian’ny lanonana famoahana azy ireo tetsy Mahamasina, nijoro vavolombelona nitantara ny sedra mafy nolalovany izy.
Vao valo taona monja i Volana dia nisaraka ny ray aman-dreniny. Telo mianadahy izy ireo no iraitampo zanak’izy mivady, ka i Volana no zokiny indrindra ankoatra ireo anadahiny miisa roa izay nanaraka ny rainy. Teo amin’ny fahasivy taonany, nanambady olon-kafa ny renin’i Volana. Mpisotro sady mpimamo anefa ity raikeliny ity. Nanomboka teo ny fijalian’i Volana. Mpiasa amin’irony orinasa afaka haba irony ny reniny. Miala ao an-trano vao mangiran-dratsy ary tsy miverina raha tsy amin’ny valo ora alina. Tany am-piandohana dia nanana mpanampy mpitaiza azy i Volana. Io mpanampy io no naka sy nanatitra azy tany am-pianarana.
Very asa anefa ilay raikeliny rehefa nivady roa volana monja izy sy ilay renin’i Volana. Mpamily fiara fitateram-bahoaka teto an-drenivohitra ity raikeliny ity. Efa nahazo fampitandremana intelo nisesy tamin’ny mpampiasa azy izy noho ny fisotroany toaka eo am-pamiliana ka voatery nandray fepetra nandroaka azy ny tompon’ny kaoperativa niasany. Tsy nahita asa hafa natao koa izy taorian’izay. Tsy arak’ireto farany intsony, araka izany, ny fanakaramana mpiasa ka rangahy indray aloha no nampiandraiketina ny zaza. Ilay mpiasa kosa naterina nody tany ambanivohitra.
Notapenana ny vava
Nentin’ny filàn-dratsiny ity raikeliny ity ka nanao habibiana tamin’ilay zana-badiny. Andro mangidy indrindra ho an’i Volana io ary mbola tsy afaka an-tsainy hatramin’izao, araka ny fitantarany : “Sendra avy nianatra aho, notsenain’ilay raikeliko tany am-pianarana. Efa mamo be izy naka ahy tany am-pianarana ka nivembena eraka ny lalana. Izahay irery no tao an-trano fa i Neny hariva foana vao mody avy miasa. Vao tonga tao an-trano aho dia nasainy noesorina avokoa ny akanjo rehetra tety an-koditro. Tampoka teo anefa, nobedainy aho ary avy hatrany dia nentiny teny am-pandriana.
Mbola kely tsy nahalala na inona na inona aho tamin’izany ka tsy nahatsikaritra akory izay anton’ny fihetsiny. Notapenany tamin’ny aron’akanjo fitondrako mianatra ny vavako avy eo ary nampitandremany mafy aho tsy hiteny intsony. Rehefa vita izay nataony dia norahonany aho tsy hilazalaza amin’i Neny, raha tsy izany dia vonoiny ho faty, hono. Tsy nahasahy nandà izay nataony aho na dia nandriaka eran’ny fandriana aza ny ra tamin’ny vatako tamin’izany andro izany”, hoy i Volana nitantara indray ny mangidy nateliny 16 taona lasa nolalovany. 25 taona moa i Volana ankehitriny.
Telo taona niharan’ny fanolanana
Araka ny fitantarany hatrany, imbetsaka izy no niharan’ny fanolanana nataon’ity raikeliny ity. Telo taona teo ho eo izany. Nanamparan’ilay tsy mataho-tody ny habibiany i Volana rehefa tsy eo ilay reniny. Teo amin’ny faha-12 taonany no nisaraka tamin’ity raikeliny ity indray ny renin’i Volana. Vaky am-batolampy mantsy ny habibiana nataon-drangahy tamin’ny fanolanana ny zana-badiny ka tsy nilefitra intsony ramatoa. “Tsy hisy hahatsapa. Mafy ny fangirifiriana nentiko nandritra io telo taona io saingy zaza aho tamin’izany ka tsy nahasahy nanohitra azy. Ankoatra ny fiainako simba tanteraka, tsy hitako intsony izay hilazana ny fahasimban’ny vatako.
Nandany volabe nitsaboana ahy ny reniko. Nihevi-tena tsy ho tratry ny aloka ilay raikeliko. Sendra ny tsy nampoizina anefa izy. Nody aloha avy any am-piasana ny reniko nahita ahy nitomany be tao an-trano. Nanontany izy sady gaga satria naboridan’ilay raikeliko tsy niakanjo aho. Nipoaka teo ny tantara ratsy rehetra”, hoy hatrany ny fitantarany. Nandray andraikitra tamin’ny fitoriana am-badiny ilay renin’i Volana, raha ny fitantarany hatrany saingy niala maina teny foana satria tafavoaka hatrany ilay rangahy na dia efa nidoboka tany am-ponja indroa aza.
“Afaka ny alahelo saingy…”
Taty aoriana, nanatona ny Fikambanana Fitia izy mianaka naka torohevitra sy nitantara ny olana nahazo an’i Volana. Nandray andraikitra avy hatrany ny teo anivon’ity fikambanana ity tany amin’ny taona 2010 tany no sady nanoro azy ireo izay tokony hatao rehetra. “Afaka ny alaheloko saingy ny fiantraikany any an-tsaiko tsy ho voafafa mandrakizay angamba. Efa nokarohin’ny mpitandro filaminana io raikeliko io ary nidoboka am-ponja manefa ny saziny hatramin’izao. Nanomboka tamin’io koa aho dia nahazo tohana nanaraka fiofanana momba ny zaitra hatrany rehefa notoloran’ny vadin’ny Filoham-pirenena milina fanjairana tamin’ny taona 2010. Ny zaitra no namelomako tena.
Nanampy ahy ilay reniko ary niaraka nanangana orinasa kely mpanao akanjo izahay ankehitriny. Tsy niasa tany amin’ilay orinasa afaka haba niasany fahiny intsony i Neny fa nanampy ahy ary lasa mpiara-miombon’antoka izahay. Izaho anefa teo anelanelan’izay dia tsy tapaka nanaraka ny fiofanana rehetra nampanaovin’ny fikambanana Fitia. Isaorako ny fandraisan’andraikitra nataon’ny vadin’ny Filoham-pirenena ankehitriny fa raha tsy nisy azy izahay efa very tanteraka”, hoy i Volana. Sady niasa no nampiana-tena i Volana nanomboka tamin’ny taona 2010 nankaty, isan’ireo notolorana taratasy fanamarinana na « attestation » fahavitan’ny fiofanana izy tetsy Mahamasina.
Mahafehy asa hafa
Nanatrika ny lanonana natao tetsy Mahamasina moa Ramatoa Mialy Rajoelina, filohan’ny Fikambanana Fitia, sady tompondaka amin’ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny mahalahy na mahavavy. Ny « formation intégrée » izay narahan’izy 30 mirahavavy ireo dia nampiarahina taranja iraisana 3 : fampivoarana ny maha-olona, ny fitantanana amin’ny fomba tsotra ary ny fandrindram-piterahana sy asa tanana 3 nisafidianana : zaitra, petakofehy ary fianarana mahandro sy manao mofomamy. Voafehin’i Volana avokoa ireo ankehitriny ary nambarany fa hampihariny amin’ilay orinasa kely efa manomboka miroborobo natsangan’izy sy ny reniny. Mampiasa olona enina eo izy mianaka ankehitriny ao amin’ity orinasa keliny ity.